Araka ny fomban-drazana dia misy ifandraisany ny fiantraikan'ny fahalotoan'ny rano maloto fahasalamana, fa ny voka-dratsin'ny fandotoan'ny rano maloto amin'ny fiainana an-dranomasina - sy ny fiantraikany ankolaka misy amin'ny olona - dia tsy azo odian-tsy hita. Ny rano maloto dia mamindra ireo otrikaretina, otrikaina, loto ary fotaka mankany amin'ny ranomasina izay mety hiteraka famaohana coral sy aretina ary fahafatesan'ny haran-dranomasina, trondro ary trondro. Ny fandotoana rano maloto dia mety hanova ny maripanan'ny ranomasina, ny pH, ny sira ary ny haavon'ny oxygen, hanakorontana ny fizotran'ny biolojika sy ny tontolo iainana ilaina amin'ny fiainana an-dranomasina.
Ny fandotoana rano maloto dia mampitombo ny fihanaky ny haran-dranomasina amin'ireo viriosy, bakteria, na zavamiaina bitika hafa, fantatra amin'ny anarana hoe pathogens. Ny valan'aretina roa amin'ireo aretina haran-dranomasina fahita indrindra, ny pox fotsy ary ny aretina black band, dia mifandray amin'ny fandotoana rano maloto. Ny pox fotsy dia avy amin'ny pathogen an'ny vavonin'olombelona Serratia marcescens, raha ny aretin'ny tarika mainty kosa dia mifamatotra mafy amin'ny firakotra makroalgal izay mitombo ao anaty rano maloto.
Haran-dranomasina Elkhorn misy pox fotsy
Sary © James Porter / National Science Foundation
Haran-dranomasina simetrika misy aretin'ny tarika mainty
Sary © Christina Kellogg / USGS
Ny otrikaina dia vato manorina ilaina amin'ny fiainana an-dranomasina. Na izany aza, ny otrikaina be loatra avy amin'ny loharanon'ny fahalotoana miorina amin'ny tany - toy ny fandrobana ny rano sy ny rano maloto - any amin'ny tontolo an-dranomasina dia miteraka fivontosana sy aretina amin'ny vatohara, fihenan'ny famokarana haran-dranomasina, fihenan'ny tsy fivadihan'ny taolana, ny fihenan'ny haran-dranomasina sy ny zava-manan'aina, ny fiakaran'ny aloky ny fitoplankton ary ny fitomboan'ny algôma. . Satria ny akorandriaka dia manivana otrikaina avy amin'ny rano ho an'ny fiforonan'ny akorandriaka sy ny tavy, dia mandray otrikaina sy loto hafa koa izy ireo. Ny fandotoana tafahoatra dia mety hiteraka fihenan'ny fahasalaman'ny akorandriaka. Ny famoahana otrikaina mitohy sy ny voninkazo algoma vokatr'izany dia mety hanimba ny haran-dranomasina sy ny tontolo iainana amoron-tsiraka ary vinavinaina hitombo ny habetsaky ny refy sy ny refy vokatry ny fiovan'ny toetrandro.
Ny voninkazo algoma dia mandany oxygen ary manakana ny tara-pahazavana ilain'ny zavamaniry anaty rano mba hamokarana oksizena, ary miteraka tontolo iainana manana oxygen ambany mihena ambany antsoina hoe hypoxia. Rehefa lany ny oxygen, dia hihetsika ny trondro sy ny foza. Ny tontolon'ny hypoxic dia mety hiteraka trangam-pandefasana haran-dranomasina, mitarika fahasimbana bebe kokoa ary mampihena ny fahafahan'ny corals. Ireto tontolo iainana feno oksizenina ireto dia vinavinaina hitombo isa sy hafanana amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Ny valin'ny fiainana an-dranomasina amin'ny hypoxia malefaka sy mafy, ao anatin'izany ny fiovana amin'ny fizotra ara-batana, ny safidin'ny toeram-ponenana ary ny sisa velona. Fanamarihana: ny BBD dia midika ho aretin'ny tarika mainty. Loharano: Nelson sy Altieri 2019
Voninkazo algoma any Great Bay Bay amin'ny 2017, ny taona Long Island no niaina ny volon'ny volontsôkôlà mafy indrindra hatramin'izao (> sela 2.3 tapitrisa / mL). Sary © Chris Gobler
Ny otrikaina ao anaty rano maloto dia mandrisika ny fitomboan'ny algala. Ny voninkazo algoma vokatr'izany dia manakana ny tara-pahazavana amin'ny masoandro tsy hahatratra ny zooxanthellae izay fotosinthesisialy mba hanomezana sakafo sy oxygen ny haran-dranomasina. Raha tsy misy oksizenina ampy, ny vatohara dia tsy afaka manaja na mamokatra ny kalsioma karbonat ilaina hananganana ny taolany.
Ny voninkazo algoma dia mandray anjara amin'ny fiakaran'ny marin-dranomasina sy ny fanamasinana asidra, ary afaka mamokatra poizina afaka mamono trondro, biby mampinono ary vorona, ary mety hiteraka aretin'olombelona na mety hahafaty amin'ny tranga mihoampampana aza.
Solida sy fandotoana hafa
Ny rano maloto koa dia misy akora matevina mihantona, toy ny zavamaniry lo, loza, mineraly ary silt - izay mitsingevana ao anaty rano. Any an-dranomasina, ireto totohondry ireto dia afaka:
Jiro manakana. Mitsingevana ao anaty rano ireo solida ireo, manakana ny tara-masoandro. Miankina amin'ny habetsaky ny fotoana sy ny halavan'ny sisa tavela, izany dia mety hiteraka fihenan'ny fotosintesis sy ny fitomboan'ny haran-dranomasina.
Haran-dranomasina mahakivy. Rehefa miorina amin'ny haran-dranomasina ireo vaingan-javatra ireo dia miteraka fihenjanana ara-batana ao anatin'izany ny famonoana, ny fihenan'ny famokarana sakafo ary ny fihenan'ny fiterahana.
Sivily manentsina. Ny sombin-javatra miantona dia mihinana akorandriaka, manentsina ny sivana.
Ahenao ny hazavan'ny rano. Ny fahadiovan'ny rano mihena koa dia mahatonga azy io ho sarotra amin'ny trondro mahita sakafo ary mety hanakorontana ny fiterahana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMandoto ny ahiahy mipoitra (CEC) dia loto ao anaty rano izay mety hiteraka fiatraikany ara-tontolo iainana na maha-olombelona, ​​ary matetika dia tsy fehezin'ny lalàna momba ny tontolo iainana ankehitriny. Ny loharanon'ireny fandotoana ireny dia misy akora simika amin'ny fambolena, fandosirana avy amin'ny tanàna, vokatra avy any an-trano (toy ny savony sy otrika otrikaretina) ary fanafody. Ny CEC dia hita ao anaty rano maloto voadra matetika sy amin'ny fifangaroana avo kokoa noho ny tamin'ny lasa, ary maro no naseho tamin'ny fananganana ny fiainana an-dranomasina.
Herisetra manimba ny ahidrano simbiotika, misy fiatraikany amin'ny fotosintesis ary miteraka fanamainana. Metaly sy fitambarana sentetika toy ny biphenyls polychlorined (PCBs) dia misy fiatraikany poizina amin'ny haran-dranomasina sy ny fiainana an-dranomasina hafa. Misy fiatraikany amin'ny famokarana haran-dranomasina, famahanana ary fitomboana, izay mampihena ny safidin'ny zavamananaina hafa avy eo. Ao amin'ny trondro dia miangona amin'ny alàlan'ny tranokala sakafo izy ireo ary mampitombo ny taham-pahafatesana amin'ny trondro lehibe kokoa. Pharmaceuticals Mety hisy fiatraikany amin'ny trondro koa ny fitondran-tena sy ny fahasalamana. Vao nanomboka ny fikarohana momba an'io sokajin'ny fandotoana io ary betsaka kokoa ny ilaina hamaritana ireo loto sy ny vokany.
Mpandahatra amin'ny endocrine
Ireo mpanakorontana endocrine - fitambarana izay misy akony amin'ny rafitra endocrine — dia karazana CEC manokana. Anisan'izany ny hormona voajanahary na syntetika ary koa akora simika vokarina ho an'ny lamba, plastika, tokantrano, na fambolena. Nanomboka nampiseho ny fomba itondran'ireto fandotoana ireto any an-dranomasina:
Amin'ny fifantohana ambany, ny antidepressants dia naseho fa misy fiatraikany amin'ny fitondran-trondro ary miteraka fahafatesan-olona.
Ny hormonina synthetic sy ny mpanelingelina endocrine - toy ny estrogen azo avy amin'ny pilina fanabeazana aizana na parabens hita amin'ny savony dia mety hanimba ny fiterahana ary hitondra anjara biriky amin'ny hazandrano mahery vaika.
Ny fandalinana vao haingana dia nanondro ireo mpanelingelina endocrine izay manangona bio-akum amin'ny trondro trondro.
Ao amin'ny haran-dranomasina dia mampihena ny isan'ireo fehin-tsirinaina atody sy mampihena ny taham-pitomboana ny mpanelingelina endocrine.
Hitety ny fanadihadiana tranga avy any Puako, Hawaii izay nanondroana ny fahalotoan'ny rano maloto ho mpandray anjara lehibe indrindra amin'ny fihenan'ny biomassa trondro ary niasa ny fokonolona hamantatra sy hamahana ny loharanon'ny loto maloto.